GỤỌ NKE Bicol Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Czech Danish Dutch English Ewe Ga Greenlandic Hiligaynon Hungarian Igbo Italian Korean Lithuanian Malagasy Persian Portuguese Romanian Setswana Shona Silozi Slovak Slovenian Swahili Tsonga Turkish Ukrainian Urdu Zulu
NA Saturday, October 6, 2001, e nwere nzukọ kwa afọ nke ndị so na Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania na Jersey City, New Jersey, U.S.A. Mgbe e nwesịrị nzukọ ahụ, ha na ndị ọbịa bịaranụ gere ntị n’usoro ihe omume pụrụ iche. N’echi ya, ná nzukọ ntụkwasị ndị e mere n’obodo anọ ndị dị na Canada na United States, ndị so n’Òtù Na-achị Isi nke Ndịàmà Jehova mara ọkwa na-esonụ mgbe ha kwusịrị okwu mmechi:
“Ka anyị na-elepụ anya n’ihu, ọ dị nnọọ oké mkpa ka ndị Chineke nile ghara ịhapụ nzukọ nke onwe ha. Pọl onyeozi gbara ume ka a na-eme nke a karị, tinyere ịgbarịta ibe anyị ume, ka anyị na-ahụ oké ụbọchị ahụ dị egwu nke Jehova ka ọ na-eru nso. (Ndị Hibru 10:24, 25) N’ikwekọ n’iwu a dabeere n’Akwụkwọ Nsọ, anyị na-atụ anya inwe mgbakọ distrikti n’akụkụ nile nke ụwa n’afọ ọzọ . E mesịa, n’afọ 2003, ọ bụrụ uche Jehova, ọ pụrụ ikwe omume inwe mgbakọ mba nile ndị pụrụ iche n’akụkụ ụfọdụ nke ụwa. Ugbu a bụ oge ịmụrụ anya ma na-eche nche, na-aghọta otú ihe si na-eme n’ụwa.”
N’agbanyeghị ọnọdụ a na-ejighị aka na ahụ́ erughị ala a nọgidere na-enwe ka usoro ihe dị ugbu a na-eru ọgwụgwụ ya, ọrụ nke ndị Chineke aghaghị ịdị na-aga n’ihu. A ghaghị ịkpọsara mba, agbụrụ, asụsụ, na ndị nile ozi ọma nke Alaeze ahụ, gụnyere ozi ịdọ aka ná ntị nke Bible, na-agwa ha ka ha ‘tụọ Chineke egwu, nyekwa ya otuto, n’ihi na oge awa nke ikpe ya na-eru nnọọ nso.’ (Mkpughe 14:6, 7) N’ihi ya, dị ka uche na ezi ọchịchọ nke Nna anyị nke eluigwe si dị, a na-eme atụmatụ inwe mgbakọ mba nile n’ebe dịgasị iche iche nke ụwa n’afọ 2003.
Iji malite, a na-emetụgodị ndokwa inwe mgbakọ ndị dị otú ahụ n’obodo ukwu ole na ole n’Ebe Ugwu America, nwa oge ka e mesịkwara, a ga-enwe ha na Europe. Mgbe oge gatụrụ na 2003, a ga-eme ndokwa ka ìgwè dị iche iche nke ndị nnọchianya gaa n’obodo ukwu ole na ole dị n’Eshia; ka ọ na-erukwa ná ngwụsị afọ ahụ, ìgwè ndị ọzọ ga-aga Africa, Ebe Ndịda America, na n’ógbè Pacific. A ga-achọ ka alaka ụlọ ọrụ ụfọdụ ziga ọnụ ọgụgụ dị nta nke ndị nnọchianya n’ebe ụfọdụ a ga-enwe mgbakọ, n’ihi ya, ọ gaghị ekwe omume ịkpọ mmadụ nile òkù ịbịa. Otú o sina dị, ọ ga-abụ ihe na-agba ume inwe ọnụ ọgụgụ dị nta nke ndị nnọchianya bụ́ ndị ga-anọchite anya mba dị iche iche n’ebe nke ọ bụla.
N’oge na-adịghị anya, ọgbakọ dị iche iche nke Ndịàmà Jehova ga-amalite inweta ihe ọmụma banyere mgbakọ ndị a. Ọ bụ alaka ụlọ ọrụ na-elekọta mba ndị nnọchianya a ga-akpọ bụ́ ndị ga-enwe ike ịga, ga-enye ihe ọmụma banyere kpọmkwem ụbọchị na obodo ndị ha ga-aga. N’ihi ya, a na-achọ ka ị ghara ide akwụkwọ ma ọ bụ jụọ ase banyere nke a ugbu a.
Ndị e mesịrị họrọ ịbụ ndị nnọchianya ga-abụ nanị Ndịàmà raara onwe ha nye e mere baptizim bụ́ ndị ga-abụ ezi ihe nlereanya ma gosipụta ịhụnanya ụmụnna n’ebe ụmụnna ndị nọ n’obodo ahụ ha ga-aga nọ. N’aka nke ahụ, ndị obodo ndị ahụ ga-enwe ohere ndị dị mma iji ịhụnanya nabata ndị ọbịa ahụ ma lee ha ọbịa nke ọma. (Ndị Hibru 13:1, 2) Nke a ga-eme ka ha ‘gbarịta ibe ha ume.’ (Ndị Rom 1:11, 12) Ọzọkwa, ọ bụ alaka ụlọ ọrụ ndị a ga-agwa ka ha ziga ndị nnọchianya n’otu mba ma ọ bụ mba ụfọdụ ga-enye nkọwa zuru ezu banyere ndokwa ndị a.
A ga-eme ndokwa maka mgbakọ distrikti maka afọ 2003 n’ọtụtụ mba dị ka a na-emekarị. Site n’ịgbakọta ọnụ, onye nke ọ bụla ga-enwe ohere ‘ige ntị, ịmụta ihe, na ịbụ onye a gbara ume.’ (Deuterọnọmi 31:12, NW; 1 Ndị Kọrint 14:31) Nke a ga-enye ndị Chineke nile ohere ‘idetụ ire hụ na Jehova dị mma.’ (Abụ Ọma 34:8) Ndị ozi ala ọzọ ga-anọ ná mgbakọ mba nile ọ bụla a ga-enwe, nakwa n’ọtụtụ mgbakọ distrikti, ụfọdụ n’ime ha ga-emekwa ihe omume.
N’afọ a, anyị ga-enwe Mgbakọ Distrikti “Ndị Nkwusa Alaeze Na-anụ Ọkụ n’Obi,” bụ́ nke ga-akpali anyị ịgbakwu àmà. Ọzọkwa, anyị ga na-atụsikwu anya ike maka ihe Jehova na-akwadebere anyị n’afọ na-abịanụ. Nke a ga-enyere anyị aka ‘ịnọrọ na nche, ịmụrụ anya, na igosipụta na anyị dị njikere’ n’ihi oge ndị a pụrụ iche ma dị oké mkpa.—Matiu 24:42-44.